Usoro iji meziwanye mmụta: nke dị irè? - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » Usoro iji meziwanye mmụta: nke dị irè?
Ndị na-arụ ọrụ na ngalaba mmụta, agbanyeghị ụdị ọrụ akọwapụtara, ga-enwerịrị ike ịchọta onwe ha na-atụgharị uche na usoro kachasị mma iji mụọ ma ọ bụ, ma ọ dịkarịa ala, usoro kachasị mma maka otu nwa akwụkwọ.
Azịza ya anaghị adị mfe n'ihi na ọ na-emekọrịta na ọtụtụ ndị na-agbanwe agbanwe: arụmọrụ nke usoro ahụ n'onwe ya, njirimara nwata akwụkwọ (afọ, ihe ịma aka ọ bụla, usoro mmụta), ụdị ozi a ga-amụ, ebe a chọrọ ka ọ mụta ...
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-ahụ maka ọgụgụ isi na ndị mmụta agụmakwụkwọ achọpụtala ma nyochaa ọtụtụ usoro ọmụmụ dị mfe iji nyere ụmụ akwụkwọ aka ịmatakwu ihe dịka mkpa ha si dị. Agbanyeghị, akwụkwọ sayensị na isiokwu ahụ buru oke ibu ma bụrụkwa ihe ịma aka ịnagide ya. Mgbe ahụ, o kwesịrị ekwesị ikele Dunlosky na ndị na-emekọ ihe ọnụ afọ ole na ole gara aga mere mpempe akwụkwọ ga-abara anyị niile uru: n’ọrụ ha, ha tụlere usoro dị iche iche iri na-akọwa ogo nke ọma na ọnọdụ dị iche iche, yana ụdị ozi dị iche iche iji mụta na dabere na njirimara di iche nke nwata akwukwo. Na nchịkọta, ha arụ nnukwu ọrụ na-enye anyị ohere ịtụle uru nke usoro ọmụmụ 10 a ọ bụla.
Nsonaazụ nke ọrụ ha, albeit sịntetik n'ihe gbasara ọtụtụ nyocha a na-enyocha, bụ ogologo akụkọ (n'agbanyeghị nke bara ezigbo uru ma anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ ya); anyị kpebiziri ichikota ya site na ịdepụta usoro ndị ahụ na nkọwa dị mkpirikpi yana ogo ịba uru.
Ka anyị malite na tebụl nchịkọta iji nkọwa nkọwa ọzọ dị ntakịrị:
Maka ndị nwere ike iji ya: ụmụ akwụkwọ kwụụrụ onwe ha n'ọmụmụ ihe ahụ ma nwee ezigbo ike ịchọpụta ozi dị mkpa ederede.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: ederede siri ike nghọta na / ma obu ederede nke i nwere ihe omumu mbu.
O nwere ike ịbụ usoro a kacha eji amụ akwụkwọ n'etiti ụmụ akwụkwọ, opekampe nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ mahadum. Ejiri iji ya mee ihe na usoro a, na obere oge agbakwunyere ya, ma ọ bụrụ na ị mụta ihe a ga-amụ ugbu a, na-akwado ya iji mee ya.
N'agbanyeghi ihe nile, ihe akaebe na-emegide usoro a na ndị dere monograph ha na-ahaputa ya dika obere ihe eji n'ihi ọtụtụ ihe: n'ọtụtụ ọnọdụ nwetakwuola arụmọrụ nke mnemonic. Ọ nwere ike ịba uru maka ụmụ akwụkwọ ahụ nwere ike gosipụta ma ọ bụ gosipụta nke ọma ma ọ bụ mgbe ederede siri ike, mana n'ọtụtụ ọnọdụ n'ezie ọ nwere ike ịka njọ arụmọrụ na arụmọrụ dị elu, karịsịa mgbe ule ndị ị ga-eche ihu dị egwu.
Isi okwu mnemonics
Maka ndị nwere ike iji ya: ụmụ gbara afọ asaa na karịa na ụmụaka nwere nsogbu mmụta.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: okwu ị ga - amụ (asụsụ mba ọzọ, wezuga ya, sayensị) ma chee echiche dị mfe.
Ọ bụ usoro ochie, dabere na onyonyo nke uche. Na ichikota n’ kacha, o mejuputara imeputa onyonyo nke nwere aha di ka nke siri kwe omume n’okwu ma obu ozi i kwesiri icheta.
Chegodi n’ichebu ntụgharị okwu Bekee ịnyịnya; nwere ike iji anya nke uche anụ ọhịa bea nke na-achụ otu ọsọ ma na-eji isi okwu ma ọ bụ, nyere nkwado okwu a n'asụsụ Italian.
Ọ bụ ezie na n'ọnọdụ ụfọdụ ọ dị ka ọ na-enye nsonaazụ dị mma, ndị dere akwụkwọ a ha debere ya n'etiti ndị obere ihe eji. Ọ dị ka ọ na - enye nsonaazụ dị mma naanị mgbe a bịara n'ịmụta okwu ndị na - etinye onwe ha mfe na - eche maka (anyị nwere ike ịsị "ihe"), mana Ọ dịghị mfe iji (chọrọ ọzụzụ a kapịrị ọnụ); mgbe ha nọ, Ihe ndị ọ na-arụpụta nwere ike ọ gaghị adịte aka. Na mgbakwunye, na nyocha ewetala nsonaazụ ha nha ma ọ bụ dị ala na usoro nkeugboro ugboro na-anwale (lee n'okpuru), na iche na nke ikpeazụ kachasị mfe na ngwa ya.
Iji ihe onyonyo maka ederede ederede
Maka ndị nwere ike iji ya: ụmụ dị afọ 8 ma ọ bụ karịa.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: ederede a ga-amụ n'ụzọ mnemonic na ozi “anya”.
Usoro a yiri ka ọ dị nhịahụ bụ ihe anya na-ahụ ihe nwa akwụkwọ na-anụ ma ọ bụ gụọ. Mepụta ihe ndị a na-ahụ anya ga-enyere ya aka ịghọta ya nke ọma ma cheta ihe ọ na-amụ.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na anyị na-ege ntị na nkuzi banyere ọdịiche dị n'etiti enyí Africa na enyi elele Asia, karịa iburu ndepụta nke njirimara, anyị nwere ike ịmepụta ihe osise na-anọchite anya ha. Ka anyị nwaa mee ya: ka anyị were anya na anyị hụrụ enyí abụọ ka ha na-emechi ọnụ, otu toro ogologo (nke Africa) karịa nke ọzọ; onye buru ibu nwere oghere abuo na-ahụ anya na njedebe nke ogwe, nke ọzọ bụ otu; Anyị na-ahụ nke ka buru ibu, ya na ya nweekwa ube, ebe nke pere mpe na-aka anya; “Ileba anya” bụ nke kachasị ukwuu anyị na-ahụkwa ntị ka ukwuu karịa gbasara ogo ya ebe enyí ndị Eshia ji obere ntị na nke gbara ya gburugburu na-ahụ ya.
M nzọ ị nwere ike icheta njirimara ndị a na-enweghị mkpa ịgugharị!
O di nwute, ma abia n’imuta ihe omuma ohuu abughi ihe di nfe. N'ezie, Dunlosky na ndị ọrụ ibe ha na-ahazi usoro a n’etiti ndi obere ihe eji. Ka anyị hụ ihe kpatara ya: n'agbanyeghị na ọ dị mfe itinye n'ọrụ karịa nke isiokwu mnemonic, uru ya na-adịkarị oge ọ bụla na okwu nwere nkọwa dị mfe iji nweta ihe oyiyi ee akụkụ Akwụkwọ Nsọ a ga-amụ n'ụzọ mnemonic, oge enweghi mmetụta dị mma na nghọta nke ederede; agbanyeghị na enwere ike ịre ụfọdụ uru na ụmụaka nke atọ (mana onweghi nwata) uru ya dị ka amachara ụmụaka nwere “o burula ụzọ” iji ihe onyonyo ma ọ bụ ụmụ akwụkwọ na-arụ ọrụ dị elu.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Iji satnav ọ na-emebi ikike ọgụgụ isi anyị?
Maka ndị nwere ike iji ya: ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị ụmụ akwụkwọ ọ bụla (ọgụgụ isi na ala dị ala, yana na enweghị nsogbu ọgụgụ, na na na-enweghị arụ ọrụ nsogbu ebe nchekwa) mana ụmụ akwụkwọ nwere amamihe dị elu na-erite uru kachasị.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: maka ihe dị ka ụdị ederede ọ bụla (ịkọ akụkọ, isiokwu akwụkwọ akụkọ, isi akwụkwọ, physics, ikike, bayoloji, teknụzụ, ihe ọmụmụ na ederede ọgụgụ isi).
Dị ka ọ dị na kọwaa / gụgharịa, Usoro a sokwa n’ihe ndị ụmụ akwụkwọ na-achọ iji mụta nke ka mma. Ọ bụghị ọtụtụ nkọwa dị mkpa: ọ bụ ihe a ga-agụgharị ederede ahụ ọtụtụ oge ka ịghọta ya nke ọma.
N’adịghị ka ihe ọtụtụ nwere ike ịtụ anya, ndị dere kwuru otu obere ihe eji nke usoro. Nchoputa banyere uzo omumu ihe a siri di lekwasịrị anya naanị na ụmụ akwụkwọ mahadum nye ndụmọdụ obere ma ọ bụ ihe amabeghị etu mgbanwe ndị ọzọ, dị ka amụrụ ihe nwata akwụkwọ na ihe omimi gara aga si emetụta arụmọrụ ya. Anyị ma na ha nọ ebe ahụ nti uto banyere ikike icheta ozi (mgbe obere oge dị mkpirikpi) mana enweghị akaebe gbasara nsonaazụ nke nghọta. N'ikpeazụ, ọ bụ ezie na ọ dị mfe ma dịkwa mfe iji, ndozi mmụta adịghị mma ma e jiri ya tụnyere usoro ndị ọzọ dịka nhazi ajụjụ, na nkọwa onwe naugboro ugboro nyocha onwe (hụ okpuru).
Maka ndị nwere ike iji ya: ụmụ akwụkwọ nwere ezigbo njikọ njikọ.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: ọkachasị mgbe ị nwerelarị ihe banyere okwu a.
Nchịkọta ederede nwere ebumnuche, n'ihu nnukwu ozi, iji mata ndị kacha mkpa, jikọta ha ọnụ iji mụta ha nke ọma. Nke a bụkwa usoro ama ama nke ukwuu ma n’ezie ọ dịghị ihe atụ dị mkpa iji ghọta ihe anyị na-ekwu.
Ọ bụ ezie na a na-akwado ike ichikota ozi mgbe niile na agụmakwụkwọ mmadụ, ihe akaebe na-egosi otu obere ihe eji nke usoro a ma ọ bụrụ na ejiri ya maka ebumnuche mmụta dị mma. Ihe kpatara ya bu na odi ka odi na - eme nke ọma naanị na ụmụ akwụkwọ nwere ezigbo ike iji chịkọta ederede (nke na-apụtaghị ma ọlị) ya mere, ọ bụrụ na anyị nọ n’ihu ụmụaka, ụmụ akwụkwọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị (na mgbe ụfọdụ, ọbụna ọkwa mahadum!), itinye usoro a n'ọrụ chọrọ ọzụzụ dị ogologo ma nke a na-eme ya siri ike itinye ngwa ngwa. Akaebe dị n ’enweghị banyere ikike iji bulite mmụta, nghota ederede na mmezi nke ihe omuma a mutara n’oge. Ọzọkwa, enweghị ọtụtụ ọmụmụ ihe na-anwale ịdị irè ya na gburugburu ụlọ akwụkwọ.
Maka ndị nwere ike iji ya: ọkachasị ụmụ akwụkwọ mahadum.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: ọkachasị maka mmụta mgbakọ na mwepụ.
Usoro a ọ mejuputara na ngbanwe nke omume di iche iche, amuwo ya n’elu ihe nile gbasara imuta mgbakọ na mwepu.
N'ebe a, nkenke, otu esi arụ ọrụ: mgbe egotara ụdị ụdị nsogbu (ma ọ bụ isiokwu), omume kwesịrị ilekwasị anya na ụdị nsogbu ahụ. Na-esote, mgbe iwebata ụdị nsogbu ọhụrụ ọ bụla, mmega ahụ kwesịrị ibu ụzọ lekwasị anya n'ụdị nsogbu nke ikpeazụ ahụ, emesịa mmega ndị ọzọ ga-amalite ịgbanye ụdị nsogbu ikpeazụ ndị a gwọburu.
Ka anyị were otu ihe atụ: nwa akwụkwọ na-agụ akwụkwọ ka esi agbakọ olu solids, nwere ike ịhụ onwe ya ka ọ na-enwe mmega ahụ na nsogbu banyere cubes, pyramid na cylinders; kama ibu ụzọ dozie ya tutti nsogbu dị na cubes, na-agafe na pyramid ma naanị na njedebe na-emetụta mmega ahụ n'ụlọ mkpọrọ, omume kpụkọta ọnụ chọrọ nwata akwụkwọ ka ọ gbanwee omume un nsogbu cubic, Uno na pyramid na Uno n'ụlọ mkpọrọ (wee bido ọzọ).
Echiche nke ịgwakọta mmega nke ụdị dị iche iche na-enyere aka mụta nke ọma, karịa ịme ihe dị iche iche site na ịmụ ha nke ọma, nwere ike iyi ihe na-agbanwe agbanwe. Agbanyeghị, ọ ga - ekwe omume na nke a bụ n'ihi na mgbanwe na - aga n'ihu ụdị mmega ahụ ga - akwalite nhazi na usoro iche echiche dị iche iche, na - enye ụmụ akwụkwọ ohere ibu ụzọ tụọ ụdị nsogbu dị iche iche.
Uzo a dicha ka odi, n’ime onodu ufodu, wedata oru ya ozugbo wee mia nkpuru n’iru ogologo site na iguzosi ike karie ma nwekwa ike itinye ihe ndi amuworo.
N'agbanyeghi ihe akaebe a chikoro n’ime akwukwo omuma sayensi, ndi mere nyocha a ji tugharia usoro a dika ịba uru. Uru bara uru n'eziokwu ahụ bụ na ọ nwapụtala onwe ya irè na mmụta mgbakọ na mwepụ; ndị cons na-anọ na data na-emegiderịta nke akwụkwọ sayensị (mgbe ụfọdụ ihe adịghị mma, mgbe ụfọdụ ihe adịghị mma ma n'ọnọdụ ụfọdụ ọbụna adịghị njọ) nke ahụ na-eme usoro nke usoro a siri mata na kedu otu ọ ga - esi baa uru karịa; dịka ọmụmaatụ, n'ọnọdụ ụfọdụ ụmụ akwụkwọ nwere ike ịnwe ntuziaka zuru oke iji rite uru na omume a. Have ga-elebara anya na n'etiti ihe omume ọ na-ewe oge karịa ọmụmụ akwụkwọ ọdịnala.
Nkọwa onwe gị
Maka ndị nwere ike iji ya: site na ụlọ akwụkwọ ọta akara gaa n'ihu, ọkachasị ma ọ bụrụ na enwere ezigbo amamihe na / ma ọ bụ ihe ọmụma gara aga
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: tumadi nsogbu ezi uche dị na ya, nsogbu mgbakọ na mwepụ, arụmọrụ algebra.
N'uzo, anyi puru ikwu na nka bu uzo esi akowa uche onwe onye na ot 'onye esi aza otua okwu ma obu uzo esi egbo otu nsogbu.
Ka anyị were otu ihe atụ: nsogbu chere otu a ihu 'square dị akụkụ anọ 4 cm; Ego ole ka perimita ahụ na-eru? ', azịza ya nwere ike bụrụ "16 cm" ma ọ bụ, n'ihe banyere ịkọwa onwe ya, nwata nwere ike ikwu "ebe ọ bụ na akụkụ ahụ nwere akụkụ anọ há nhata, amakwa m n'ogologo otu akụkụ, enwere m ike ịme 4 x 4 nke bụ 4 ".
Na nyocha Usoro a ka ịba uru. Ike ya dị na Jehova ike pụtara na mmekọrita maka ọdịnaya dịgasị iche, ihe omume na ụzọ nyocha (omumu ihe omumu, nghota na ike iji ihe omumu a muru). O dikwa ka egosiputara onwe ya bara uru n'ọtụtụ afọ, agbanyeghị na amabeghị ma abamuru ya nwere ihe jikọrọ ya na ihe mmụta nwata ahụ nwere. Agbanyeghị, amabeghị oge mmetụta ọ na-adịru nke usoro a (ma e jiri ya tụnyere oge njigide nke mmụta achọrọ na gburugburu ụlọ akwụkwọ). Itinye usoro a chọrọ ogologo oge ndi ozo (30% - 100% ọzọ). Ọ ga-ekwekwa na a chọrọ oge ọzụzụ ga-arụ ọrụ nke ọma.
Ajuju di na nwunye
Maka ndị nwere ike iji ya: site na ụmụ klas nke anọ maka oge mbụ, ọkachasị ma ọ bụrụ na enwere ezigbo ihe omuma banyere isiokwu a ga-amụ.
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: tumadi eziokwu na mmachi amaghi.
Isi ihe nke nhazi ajụjụ ọ mejupụtara n’ịgwa nwa akwụkwọ ahụ ka o mepụta nkọwapụta nke nkwupụta emere. Dịka ọmụmaatụ, ọ nwere ike ịmasị ajụjụ "kedu ihe ị chere na ọ dabara adaba ikwu na nke a ...", "Gịnị kpatara nke a ji bụrụ eziokwu?" ma ọ bụ ọbụna, n'ụzọ dị mfe "N'ihi gịnị?".
Echiche bụ isi bụ na ajuju nhazi a na-akwado njikọta nke ozi ọhụrụ na ndị nke dị adị. Iji mee nke a dịka o kwere mee, ọ dị mma ịgba onye mmụta ahụ ume ka ọ kọwakwuru ya otu o kwere mee, na-akwado ntụnyere na ọdịiche dị n'etiti ihe dị iche iche., ma rụrụ ya dịka enwere ike.
Ndị dere akwụkwọ a kwenyere na usoro a di ịba uru. A gosiputara idi nma ya na imuta otutu ihe omuma mana nodu echeghi na itinye n'ọrụ nke nhazi ajụjụ gbasara ọdịnaya toro ogologo ma ọ bụ sie ike atulere na ndepụta nke ihe dị nkenke. Mgbe ọ na-egosi bara uru ugbua na afọ ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ praịmarị, withmụaka nwere obere ihe ọmụma na-erite uru obere n’isiokwu a ga-amụ.
Ime nyocha kwenyere naịdị irè na-atụnyere ule nwa oge ọmụmụ ule dị mkpirikpi ma enweghi ihe akaebe zuru oke banyere mmụba nke nghọta nke ihe ịmụworo na ikike iji nọgide na-amụ ihe ogologo oge.
Maka ndị nwere ike iji ya: dị irè site na afọ 2 ruo 3  gaa n’ihu, n’ọrịa dị iche iche (nsogbu nke ikwu okwu, n’ọrịa sclerosis), akwara ụbụrụ na amnesia).
IHE IHE G ITN IT KWES ITR. BAARA: ọdabara na ọmụmụ nke isiokwu ọ bụla.
Ọ dịwo anya a mara na, maka otu oge ejirila, ọ bara uru ikesaa ọmụmụ ihe otu oge karịa ịmụ ya otu mgbe.. Site n'okwu ndị a 'kesaa omume anyị na-ekwu maka ha abụọ nsonaazụ oghere (nka bu uru ahutara na ekewa ihe omumu ahu n’ime otutu oge karie itinye ya n’agha) al lag mmetụta (i.e. uru nke a na-ahụ site na ịbawanye anya n'etiti etiti oge n’etiti ọmụmụ ihe karịa imechi ha obere).
Usoro a na - eduga na nsonaazụ dị ụtọ: iji ya tụnyere ọmụmụ ihe a tụbara n'otu oge ma ọ bụ ntakịrị, mmụta n'oge dị mkpirikpi na - egosi iji nwayọọ ma mgbe ụfọdụ ọ naghị abịarute ọkwa a hụrụ n'ọmụmụ kpụ ọkụ n'ọnụ na oge na - enweghị oge ọ bụla. opekempe. Achọpụtara ọghọm a karịsịa ma ọ bụrụ na etiti oge ọmụmụ ihe sara mbara. Ajuju a juo ebe odi uru ndi a. Azịza ya bụ na ike nke mmụta. Ihe a na-amụ n’ọmụmụ ihe dị ezigbo nso na-echefu ngwa ngwa karịa ihe a na-amụ site n'ịbawanye oge n'etiti otu ọmụmụ na oge ọzọ.
Nyere ihe akaebe na akwukwo sayensị, ndi dere nyocha a kwenyere na kesaa omume ha abuo nnukwu ịba uru. Ọ na-enyo na ọ fọrọ nke nta dị irè na afọ niile e na ọnọdụ pathologies dị iche iche, ọ bụ nwalere na mmụta dị iche iche ụlọ akwụkwọ ma nwalee n'ọtụtụ ụzọ, na-egosipụtakwa mmetụta na-adịgide adịgide n’oge. Ọ na-egosi bara uru maka mmụta ma ọdịnaya dị mfe ma sie ike.
Maka ndị nwere ike iji ya: dị mma site na ụlọ akwụkwọ ọta akara (ụlọ akwụkwọ ọta akara) gaa n'ihu, na ọnọdụ dịgasị iche iche (dịka ọmụmaatụ Ọrịa Alzheimer na otutu sclerosis).
Testedbụ onye anwale maka mmụta ụlọ akwụkwọ na mahadum na-abụkarị ụmụ akwụkwọ na-enwetakarị nkụda mmụọ. Agbanyeghị, ọ dị mma ịmara na ịnwale ihe a mụrụ bụ n'aka nke ị ga - eme ka o nwekwuo ma nwekwaa ike inweta ihe ọmụma enwetara.
Agbanyeghị, anyị ekwesịghị iche maka ịnwale ihe ọmụma naanị dị ka ihe dị na mpụga nke onye nkuzi ma ọ bụ prọfesọ na-ekpebi arụmọrụ nwa akwụkwọ ahụ. Usoro a tinyekwara ụdị nyocha nke onwe, dịka ọmụmaatụ mgbake nke ozi a na-echeta na mmadụ, ikekwe site na ịza ajụjụ ndị a na-enwekarị na ngwụsị akwụkwọ akwụkwọ, ma ọ bụ site na iji flashcards, ma ọ bụ ọbụna site na ị na-eme mmega ahụ chọrọ iweghachite ozi. gụrụ.
N'ụzọ bụ isi, a na-atụpụta usoro abụọ iji kọwaa arụmọrụ nke usoro a: nsonaazụ na mmetụta nke mgbasa ozi. Nsonaazụ ndị ahụ na-eleba anya na ugboro ugboro na-eleba anya na ozi ịhazigharị ozi kemgbe, site na ịnwa icheta ozi ebumnuche ndị ahụ, a na-arụkwa ọrụ ncheta ndị ọzọ jikọtara ha, na -emepụta usoro sara mbara nke na-enye ohere ọtụtụ ụzọ iji kwado ohere ịnweta ozi a na-esote. . Tụnyere nsonaazụ nke ogbugbu, nnwale ugboro ugboro nke mmụta ga-eme ka ngbasa ozi nke ndị mgbasa ozi dịkwuo irè (dịka ọmụmaatụ, nkọwa buru oke nke metụtara echiche ebumnuche na echiche ndị metụtara ya).
Ihe ọ bụla usoro kachasị mkpa, ihe akaebe ahụ gosiputa usoro a dika nnukwu ịba uru. Ihe kpatara ya mfe nke ngwa, agbatịkwuru n'ọtụtụ ọnọdụ, afọ na ọdịnaya ị ga-amụta.
Ọ bara uru na mmụta mnemonic, ntụgharị, okwu, ihe ọmụma banyere sayensị, akụkọ ihe mere eme na akparamagwa, na mmụta nke ịmụba amụba, na ọmụmụ nke ederede dị iche iche na ụdị ...
Agbanyeghị, a ga-amụ banyere njirimara ụmụ akwụkwọ nwere ike ịba ọtụtụ uru na ya.
Maka otu oge, ọmụmaatụ, usoro a yiri ka ọ ga-arụ ọrụ karịa ịgaghachi n'ihe ọmụmụ a mụrụ.
Na mkpokọta, usoro a na-egosi ihe bara uru karịa mgbe etinyere ya: otu ule na-abịakarị, ị na-amụtakwu; ule kachasị mma na obere karịa karịa nyocha na nyocha karịa.
Akụkụ ọzọ bara uru iji mejuputa usoro a bụ ojiji nke nzaghachi n'oge usoro nyocha: mgbe ị na-adị irè n'agbanyeghị enweghị nzaghachi, ọnụnọ ha na-ekwe nkwa nsonaazụ ka mma.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Usoro ọgwụgwọ maka aphasia post-strok: ọ bara uru?
Arnold, HF (1942). Mmetụta nke usoro ọmụmụ ihe ọmụmụ gbasara akụkọ ihe mere eme. Journal nke Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ, 33(6), 449.
Balota, DA, Duchek, JM, Sergent-Marshall, SD, & Roediger III, HL (2006). Mweghachite gbasaa na-arụpụta uru karịrị oge erughị? Nchọpụta nke oghere oghere na ịka nká na mbido ọrịa Alzheimer. Psychology na ịka nká, 21(1), 19.
Barnett, JE, & Seefeldt, RW (1989). Guo ihe otu mgbe, kedu ihe ị gụrụ ọzọ?: Agụghachi ugboro ugboro ma cheta. Journal nke omume agwa, 21(4), 351-360.
Benjamin, AS, & Tullis, J. (2010). Kedu ihe na-eme ka omume ekesa dị irè? Ọgụgụ isi, 61(3), 228-247.
Callender, AA, & McDaniel, MA (2009). Obere uru nke ịgụghachi agụmakwụkwọ. Akwukwo Akwukwo Nso nke Akwukwo Nso, 34(1), 30-41.
Cermak, LS, Verfaellie, M., Lanzoni, S., Mather, M., & Chase, KA (1996). Mmetụta ikwugharị ugboro ugboro na ncheta ndị ọrịa amnesia na arụmọrụ amara ha. Neuropsychology, 10(2), 219.
Ersmụaka, JB, & Tomasello, M. (2002). Twomụaka dị afọ abụọ na-amụta ọnya akwụkwọ akụkọ, ngwaa, na ihe omume sitere na mkpughe ma ọ bụ nkesa. Ọmụmụ nke mmepe, 38(6), 967.
Fritz, CO, Morris, PE, Nolan, D., & Singleton, J. (2007). Andmụbawanye usoro mweghachi: Ihe enyemaka bara uru maka mmụta ụmụaka n'ụlọ akwụkwọ ọta akara Akwụkwọ edemede Quarterly Journal of Experimental Psychology, 60(7), 991-1004.
Goverover, Y., Hillary, FG, Chiaravalloti, N., Arango-Lasprilla, JC, & DeLuca, J. (2009). Ngwa dị n'ibe oghere ka ọ dị mma iji mụtakwu mmụta na ebe nchekwa n'ime ndị nwere ọrịa sclerosis. Akwụkwọ bụ Clinical and Experimental Neuropsychology, 31(5), 513-522.
Guttmann, J., Levin, JR, & Pressley, M. (1977). Ihe osise, eserese nke obere, na obere echiche ụmụaka na-ekwupụta mmụta. Journal nke Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ, 69(5), 473.
Hunt, RR, & Smith, RE (1996). Accessnweta ihe kachasị site na izugbe: Ike nke pụrụ iche na ọnọdụ nke nhazi. Nchekwa & Cognition, 24(2), 217-225.
Levin, Joel R., Patricia Divine-Hawkins, Stephen M. Krest, na Joseph Guttmann. "Ndịiche dị iche na mmụta site na eserese na okwu: Mmepụta na ntinye nke ngwa." Journal nke Agụmakwụkwọ Agụmakwụkwọ66, ọ dịghị. 3 (1974): 296.
Oakhill, J., & Patel, S. (1991). Ọmụmụ ihe onyonyo nwere ike inyere ụmụaka nwere nsogbu nghọta aka. Journal of Research na ọgụgụ, 14(2), 106-115.
Raney, GE (1993). Nyochaa mgbanwe n’ime ibu ọgụgụ isi n’oge ọgụgụ: Ike ụbụrụ metụtara ihe omume na nyochaghachi oge. Journal of Experimental Psychology: Mmụta, ebe nchekwa na cognition, 19(1), 51.
Rawson, KA, & Van Overschelde, JP (2008). Olee otu omuma si akwalite ebe nchekwa? Usoro pụrụiche dị na ebe nchekwa. Journal nke ebe nchekwa na Asusu, 58(3), 646-668.
Rohrer, D., & Taylor, K. (2007). Nsogbu nsogbu mgbakọ na mwepụ na-eme ka mmụta dịkwuo mma. Science Ozizi, 35(6), 481-498.
Sumowski, JF, Chiaravalloti, N., & DeLuca, J. (2010). Omume iweghachi na - eme ka ebe nchekwa dịkwuo ọtụtụ na sclerosis: itinye ọgwụ na ntinye nke nnwale. Neuropsychology, 24(2), 267.
Vlach, HA, Sandhofer, CM, & Kornell, N. (2008). Mmetụta sara mbara na ebe nchekwa ụmụaka na ntinye udi. Nkọwa, 109(1), 163-167.
mụta nke ọma, mmụta, ịmụ akwụkwọ, mụọ ihe nke ọma
Usoro iji meziwanye mmụta: nke dị irè?2020-06-132020-07-09http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/06/tecniche-per-migliorare-lapprendimento.-quali-sono-davvero-efficaci..jpg200px200px
Meziwanye njikwa onwe onye nke mmụta site na iji ngosipụta dị mfeMmụta, isiokwu